“Weligay Ma Aadi Doono Xafladaha FIFA” Luis Suarez Oo Si Qiiro Leh Uga Sheekeeyay Sidii Ba’nayd Ee Uu Ganaaxii FIFA Noloshiisa U Saameeyay. - iftineducation.com
iftineducation.com – Weeraryahanka kooxda Barcelona ayaa ugu danbayn afka furtay isla markaana sheegay in ganaaxii ay FIFA kusoo rogtay 2014 kadib marki uu qaniinay ay si baaxad weyn u dhaawacday isaga iyo qoyskiisaba.
Weeraryahankaan heerka caalami ee reer Uruguay ayaa falkaas ku kacay kulan ay qarankiisu la ciyaarayeen Italy wareegii Groupyada, FIFA ayaana xiddigaan 9 kulan oo heer qaran ah qoorta u sudhay iyadoo sidoo kalena mudo 4 bilood ah laga mamnuucay wax dhaqdhaqaaq kubadeed ah taas oo uu xataa Giorgio Chiellini oo dhibane u ahaa Suarez u ku sheegay in laga badbadiyay.
Weraryahankaan ayaa sido kale sheegay in arrintaan ay si aad ah u xanuunjisay qoyskiisa gaar ahaan ubadkiisa iyo xaaskiisa Sofia isagoona qirtay in uu xaaskiisa iyo caruurtiisaa been uga sheegay dhacdadaan.
“Aad ayaan u dhibtooday, waxaan ahay ibnu aadan dhibtoon kara isla markaasna dareemayaal leh. Gabadhayda yari way ka war qabtay marxalada uu aabaheed marayo ” ayu yidhi Suarez kaas oo isla markiba lagu khasbay in uu ka ka dhex baxo kooxda qaranka kadib ganaaxan.
“Waxaan donay in aan diyaarada fuulno si aan u aadno Rio isla markaasna aan ula soo ciyaarno Colombia, xaaskayga ayayna qoyskeeda u sheegeen in aysan diyaarada kori isla markaana ay aabaheed soo raacdo”
“Qiyaaso midaas. waxay ahayd maalmihii iigu adkayd noloshayda. waxaan ahay aabbe. Waxaan leyahay dareen. Kadib waxaan imi Barcelona si aan tababarka ugu qaato Gym-ka maxaa yeelay cag ma aanan saari karayn xerada tababarka, aad ayay ii dhaawacday marki ay carruurtaydu i weydiiyeen sababta aaan u ciyaari waayay”
Suarez oo hadalkiisa si wata ayaa yidhi” waxay ahayd khalad aaan galay ubadkayguna way ogaayeen in aabahood u yahay ibunu aadam isla markaana khalad uu geli karo, Balse Sofia waxaan u sheegay been waxaana ku andacooday in aanan falkaas ku kicin ”
“I ganaaxa 10, 15 ama 20 kulan balse iila dhaqma sida in aan ahay ciyaartoy, in aad la ii diido in aan xataa garoonka tababarka soo galo waa mid aad dhaawaeeda dareemi karto”
“Taas waa sababta aanan u aadin xafaladii FIFA, weligayna dib uma aadi doono , taas waan ku celcelin doonaa mar kasta wax mushkilad ahna iguma hayso in aan dhaho weligay ma aadi doono xafladaha FIFA” ayuu Suarez hadalkiisa kusoo gabagabeeyay.
Wax yar kadib dhacdadaas Luis Suarez ayaa ka baxay kooxda Liverpoool isla markaasna u wareegay Barcelona iyadoona kooxda atalanka ay khatarta u badheedhay isla markaasna ay weeraryahankaan ka bixisay €80 million.